Taliyaha Ciidanka Asluubta oo maanta kormeeray degmooyin katirsan gobolka Sh/Hoose – Radio Muqdisho
Kormeerka Taliyaha Ciidanka Asluubta Soomaaliyeed S/Guuto Xuseen Xasan Cismaan uu maanta ku tagey degmada Afgooye Ee gobolka Shabeelaha Hoose ayaa waxa uu ka Bilowday xabsiga Dhexe Ee Xamar Isagoo Xarumo dhowr ah oo ay Asluubtu leedahay sii maray intii uu Jidka ku sii jiray.
Taliyaha ayaa waxaa uu ugu horeyn Kormeeray Taliska Dhexe Ee Ciidanka Asluubta Soomaaliyeed ay ku leeyihiin Degmada Dharkenley Ee Gobolka banaadir Halkaas oo uu indha indheen ku sameeyay Dib u Dayactir Xarunta ku socda Isagoo Warbixin ka dhageystay Saraakiisha Ciidanka Ee Halkaa ku sugan kadibna waxaa uu sii watay Socdaalkiisa oo Afgooye ku ekaa.
Sidoo kale Taliyaha Ciidanka Asluubta Soomaaliyeed S/Guuto Xuseen Xasan Cismaan waxaa uu Kormeeray iyadana Xarunta Agoonta Wiilasha deegaanka lafoole Ee Gobolka Shabeelaha Hoose Isagoo ku soo wareegay qeybo ka mid ah xarunta oo uu ka muuqday Bur Bur lixaad leh ka dibna Sacdaalkiisa ayuu sii watay.
Degmada Afgooye Ee Gobolka Shabelaha Hoose Markii uu Gaaray ayuu Xarunta Agoonta Gabadhaha Degmadaas Isagoo warbixin ka dhageystay Saraakiisha Asluubta Ee Xarunta Maamula ka dib ayuu Saxaafada la hadlay Taliyuhu isagoo digniin u diray Dad uu sheegay in ay Xoog ku haystaan Hanti Asluubtu leedahay iyo kuwo dhisanaya hadda Beerihii Ciidanka Asluubta.
Intaa ka dib taliyuhu waxaa uu Kormeeray Xarunta Maamulka Degmada, Saldhiga Booliska Degmada, iyo Xabsiga Degmada Afgooye waxaana uu kulan la qaatay Maamulka iyo Saraakiisha Ciidamada amaanka oo ay Arimo Dhowr ah ay ka wada hadlen Taliyaha ayaana Gudoomiyaha Afgooye ka codsaday in uu dib u dhis ku sameeyo Dhowr KM oo wadada Laamiga ah inta u dhaxeysa Afgooye iyo Deegaanka carbiska halkaas oo uu Bur bur lixaadleh ka jiro.
Gudoomiyaha Degmada Afgooye Afgooye Xaaji Gaabow Cusmaan ayaa waxaa uu taliyaha u sheegay in uu soo dhamaaday qorshe Maamulku wadadaas ku dhisayo dhawaana uu bilaaban doono.
Maamulka Sh/Dhexe oo deeq gaarsiiyay haweeney 4 caruur ah ay ka geeriyoodeen